वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : 'लाल बत्ती बजार' को समर्थनमा दुई शब्द
वामदेव गृहमन्त्री भएपछिको एउटा निर्णयले नेपाली समाजमा धेरै तरंग ल्याईदिएको छ र थुप्रै वहसहरु उठाएको छ। यसले हाम्रा सामजिक र सांस्कृतिक मान्यताहरुको 'शूतुरमुर्गी' रुपलाई ह्वाङ्गै देखाइदिएको छ। जतिसुकै कथित गौरवमयी परम्पराहरु र 'सांस्कृतिक आदर्श'हरुको कुरा गरेपनि साँझ परेपछिको हाम्रो यात्रा भने अन्तै कतै पुगिसकेको रहेछ। यी तमाम विकृतिहरुको मलजलमा समाज र सरकारकै धेरै हस्तीहरु सामेल छन्, तर हामी नदेखेझैं गरीरहेछौं। अब भने देखेको छु भनेर स्विकार्ने र सही सामाधान खोज्ने दिन आएको हो कि?
हामीकहाँ काम गर्न भन्दा पनि 'गरेझैं देखाउन' मात्रै निर्णयहरु हुन्छन्। 'राती एघार बज्नासाथ सबैले झ्याल-ढोका थुन्नुपर्ने' राणाकालीन शैलीको आदेश पनि यस्तै बेतुकको र लहडी निर्णय हो र कुनैपनि समस्याको गतिलो विश्लेषण नगरी सनकका भरमा हचुवा समाधान दिने हाम्रा नेताहरुको काम गराईको निरन्तरताको अर्को अध्याय मात्रै हो।
काठमाण्डौं एउटा आधुनिक शहर हो र आधुनिकतासंगै रात्रिजीवन पनि यसको यथार्थ र जरुरी आवश्यकता हो। एउटा कुरा के स्पष्ट पारीहालौं भने 'रात्रीजीवन'भित्र नेपालमा सामान्यतया परिभाषित गरिने नाचगान र देह-ब्यापारका कुराहरुमात्रै पर्दैनन्(ती कुराहरुका बारेमा तल चर्चा गरौंला)। एउटा आधुनिक ब्यस्त शहरले अरु थुप्रै पेशागत कामहरु पनि गरिरहेको हुन्छ रातभरि। त्यसकारण यो काइते निर्णयले काठमाडौंलाई धेरैतिरबाट अँठ्याएर सकस दिने ठाऊँ छ। हाम्रो प्रहरी-प्रशाशन उसैपनि 'कुख्यात' छ जनतालाई दु:ख दिन, अब यहि निर्णयको मारमा कति सोझा जनताहरु पर्ने हुन्!
रेष्टूरेण्ट र बारहरुको हकमा मात्रै यो निर्णय भएको हो भनेर पनि चोखिने ठाउँ बिल्कूलै छैन। विदेशी पर्यटकहरु हाम्रो नेपालका र काठमाण्डौंका सबैभन्दा ठूला 'अन्नदाता' हुन्। पैसा खर्च गरेपछि उनीहरुले सकेसम्म रमाईलो बसाई खोज्नु स्वाभाविक हो। रमाईलो रात्रिजीवन त्यसकै एक अंग हो। त्यसकारण यो निर्णयले काठमाण्डौं र समग्र नेपालकै पर्यटन उद्योगमा नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ।
काठमाण्डौंमा हुने देह-ब्यापार नयाँ कुरो होइन र यसलाई जोगाउन र हुर्काउन प्रहरी र प्रशाशनकै दह्रिलो आड र भरथेग भएको कुरा पनि नयाँ होइन। सडक-सडकका नगरवधूलाई धम्क्याएर 'नि:शुल्क' यौनआनन्द लिने र उल्टो हफ्ता समेत असुल्ने नेपाली प्रहरीलाई नचिनिएको होइन। अहिलेका डान्स बारहरुका संचालकहरुले पनि प्रहरी र प्रशाशनको आड नलिई यति ढुक्कले आफ्नो कारोबार गरेका छैनन्। नेपालको र विशेष गरी काठमाण्डौंको यौन-बजारले विशाल समानान्तर अर्थतन्त्रको रुप धारण गरिसकेको छ। यसबाट प्रहरी-प्रशाशनले लिने रकम पनि करोडौंमा पुग्छ होला। अचेल पत्रिकाहरुमा पढ्न पाईन्छ, 'सेक्स डान्स' हुने यस्ता बार र रेष्टूरेण्टहरुका ग्राहक ओसार्ने काममा समेत सबै तहका प्रहरीहरु संलग्न छन्, काठमाण्डौंको 'सुरक्षा' गर्न बसेका हाम्रा प्रहरी दाजुभाइहरु! कहिलेकाहीँ त्यस्ता ठाउँहरुमा 'छापा' मारेको खबर पनि आउँछ, तर प्रहरीले त्यहाँ नाचीरहेका दुइ-चार केटीहरुलाई समातेर ल्याएर उल्टो बेइज्जती र यौन-शोषण गर्छ। धन्दा चलाउनेहरुलाई छुँदा पनि छुँदैन
यौन-ब्यापार गलत हो-होइन भन्ने कुरामा लामो बहस चल्न सक्छ। तर जसले जे नियम-कानून बनाएर रोक्न खोजेपनि यो चल्दै आएको छ। 'मानवजातिको सबैभन्दा पूरानो पेशा' भनेर त्यसै भनिएको होइन यसलाई। हो, हाम्रो समाजमा जबर्जस्ती बेश्यावृत्तिमा लगाइएकाहरु अथवा गरीबिको कारण त्यता लाग्न बाध्य भएकाहरुको अंश ठूलो छ। त्यो अबश्थाको अन्त्य हुनु जरुरी छ। त्यसका लागि हाम्रो सामजिक-आर्थिक ब्यबश्थामा धेरै सुधार र परीवर्तन जरुरी छ; रात्रीजीवनमाथि कडाइ गरेर अथवा वेश्यावृत्तिलाई प्रतिबन्ध लगाइएको घोषणा गरेर मात्रै त्यो समस्याको अन्त्य हुँदैन।
अनियन्त्रित यौन-बजार बढ्दै जाँदा यौन रोगहरुको विस्तार पनि अनियन्त्रित हुँदै जान्छ। आसन्न यौन-रोग महामारीको बारेमा गम्भिरतापूर्वक चिन्तन गरिएको र त्यो हुन नदिन योजनाबध्द ढंगले काम गरिएको छैन अझै।
त्यसकारण सरकार र समाज अलिकति उदार हुनु जरुरी छ। भईरहेको कुरालाई स्विकार्नुको विकल्प छैन। यौन-ब्यापारलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्छ किनकि अबको काठमाण्डौंका लागि ब्यबश्थित यौन-बजारको विकल्प छैन। शहरको मूलबस्तीभन्दा अलग एउटा ठाऊँ यौन-केन्द्रित गतिबिधिहरुको लागि छुट्याउने र त्यसलाई 'लाल बत्ती बजार'(रेड लाइट एरिया)को रुपमा विकास गर्ने काम सरकारी योजनामै पर्नुपर्छ। होइन, सरकारलाई 'लाज' लाग्छ (!) भने केहि नीजि ब्यबसायीलाईनै जिम्मा दिएपनि भयो।
यस्तो रेड लाइट एरियामा कार्यरत सबैको नियमित स्वास्थ-जाँच गर्नुपर्ने बाध्यात्मक ब्यबश्था पनि गरिनुपर्छ र हरेक यौनकर्मीको बारेमा प्रष्ट तथ्यांक राखिनुपर्छ। यौन-रोगको अनियन्त्रित विस्तार रोक्ने एउटै उपाय यहि मात्र हो।
यौन-ब्यापार र यससंबन्धी बिभिन्न गतिबिधिले सृजना गरेको विशाल अर्थतन्त्र कानूनी सीमामा आईसकेपछि यसबाट देशलाई हुने आर्थिक लाभ पनि सानो हुने छैन।
अर्कोतिर, दिनभरि ठूला-ठूला आदर्शका कुरा गरेर साँझ पर्नासाथ बेश्यागमन गर्नेहरुको अनुहार पनि सजिलै उदांगिने छ। हाम्रो समाजमा जो यौन-ब्यापारको बिरोधमा चर्का-चर्का कुरा गरिरहेका छन्, उनीहरुनै सबैभन्दा धेरै वेश्यागमन गर्छन्। अहिलेको 'भूमिगत यौन उद्योग'मा त्यस्ता मान्छेहरु सजिलै 'लुकेर' बस्न सक्छन्।
उजेली September 16, 2008 at 10:30 PM
तथाकथित आदर्शवादीहरूलाई र सुन्दरी प्रतियोगिता पनि हुन नदिने यथास्थितिवादीहरूलाई तपाईँको यो कुरा नपच्न सक्छ अथवा नपचेजस्तो देखाउन सक्छन् । तर वास्तविकता तपाईँले भनेजस्तै हो । विश्वभरि नै मान्यता पाइसकेको यौन व्यापारलाई अझ पनि गैरकानुनी नै बनाउनु निश्चयपनि आधूनिकतावादतर्फ लम्कनु होइन । फेरि यौनव्यापार भनेको गलत हो भन्नपनि नसकिने अवस्थामा यसलाई व्यवस्थित पार्नैपर्छ, यसबाट अगाडि हुने क्षतिलाई न्युनिकरण गर्नका लागि । जसलाई यसप्रति आपत्ति हुन्छ उसलाई त्यो क्षेत्रमा नजाने छुट पनि हुन्छ, व्यर्थको विरोध गर्नुपर्दैन पछाडि टाउको फर्काएर अगाडि हिँड्न खोज्ने तथाकथित आमुल परिवर्तन चाहनेहरूले ।
परिवर्तन September 17, 2008 at 9:28 AM
मलाई पनि अब लालबत्ती एरिया हुनै पर्छ भन्ने लागेको छ। नियन्त्रणको कुरा लगभग असँभव छ। सरकारका मन्त्री र लब्ध-प्रतिष्ठितहरुका नैतिक शिक्षाले मात्र नियन्त्रण गर्न गार्हो छ। त्यसले अब सरकारले हेर्नु पर्ने पक्ष व्यवस्थापन पक्ष हो। व्यवस्थापन पक्षलाई बलियो कानूनी सँयन्त्र सहीत ल्याऊनु पर्छ। सजिलो बाटोबाट चाँडो धनी हुन खोज्नेहरु यस व्यवसायमा मौलाऊन सक्छन। कानूनी प्रावधानलाई चोरबाटो बाट पछार्दै सँगठीत रुपमा चकलाघर चलाऊनेहरु मौलाऊन सक्छन। डरलाग्दो पक्ष यही हो। जापानको अनुभव पनि यस्तै छ नी। होईन र?
अनि मेरो मनमा ऊठेको कौतुहलता के हो भने के नेपालीहरु साँच्चै यतिका धनी छन र? जापानमा प्रचलित दर-रेट डान्सबारका पेय-पदार्थ र खानामा लाग्छ भन्ने कुरा पढदा यहाँका ऊपभोक्ताहरु निक्कै धनी छन जस्तो लाग्यो। सरकारलाई राजश्व नबुझाऊने ठग-व्यापारीहरु, दुई-नँबरी तस्करहरु मात्र त यहाँका ग्राहक होईनन होला। यहाँ केही कर्मचारी, ईन्जीनियर, डाक्टर, वकील, पत्रकार, प्राध्यापकहरु पनि हुन सक्छन। अनि नियमीत कमाई भन्दा दशगुणा बढी हुने यस्तो खर्चका लागी अनियमित कमाई कहाँबाट आयो त? लुटको धन फुफूको श्राद्ध गर्नेहरुलाई पनि सरकारले कानूनी नियन्त्रणमा लाग्नु पर्यो नी।
त्यसैले, वसन्तजी, कुरा यहाँ गहिरो छ। एकातिरको आर्थिक अराजकता र भ्रष्टाचार यी डान्सबार सँस्कृतिमा देखिएका हुन। अनियन्त्रित भ्रष्टाचार सरकारले रोक्न सक्दैन भने सँगठीत रुपमा हुर्कँदै गएको डान्सबार सँस्कृति पनि रोक्न सकिन्न। पर्यटन ऊधोगका लागी यस प्रवृतिको रात्री सँस्कृतिले मद्दत गर्छ भने क्यासीनोहरुकै वरिपरि खोल्न अनुमति दिए त भईहालियो नी। तर, के गर्नु अर्थको चकाचौँधले सन्चालक देखी सुरक्षा तथा अनुगमन एकाईहरु क्यासीनोमै पनि भुत्ते सावित भईसकेका छन।
Badri Shrestha September 17, 2008 at 10:32 AM
बसन्त जी तपाईंले एकदम राम्रो कुर उठाउनु भयो !
राती १०-११ बज्न साथ रेष्टूरेण्ट र बारहरु बन्द गराएर मात्रै यौन अपराध र अन्य कुनै अपराध नियन्त्रन हुने चाँही पक्कै होइन, यस्को लागि त चेतना जगाएर ब्यबस्थान पक्ष बलियो बनाउनु पर्छ होला...
आकार September 17, 2008 at 9:33 PM
समस्याको समाधान सायद यो पनि हुनसक्छ कि, यसलाई व्यवस्थित गर्ने । यहाँ त रोजीरोटिको सवाल पनि छ ।
नेपालमा चल्ने प्राय डान्स बारमा ठुला नाम चलेका नेता र प्रहरीकै हाथ छ ! सबै गतिबिधि प्रशासनकै आड़मा चलिरहेको हुनाले सरकार लाई यो कुरा थाहा नभएको पक्कै होइन ! देश बिकाश र भ्रस्टाचार नियंत्रण तिर ध्यान दिनु पहिलो प्रयास हुनु पर्छा ! जहा सम्म रेड लाइट एरिया को कुरा छ : एकछिन सोचौ, हतारमा निर्णय नलिऊ ! अहिले डान्स बार जाने ठुला नेताहरु या मान्छेहरु रेड लाइट एरिया खोले पनि त्यहा जादैन जस्तो लाग्छ मलाई : उनिहरु को इज्जत को कुरा आउछ नि ... रेड लाइट एरिया भन्दा अर्कै एरिया मा यस्ता गतिबिधि फैलिने सम्भावना हुन सक्छ
nepali September 19, 2008 at 12:05 PM
Good analysis. But do you think that the issues that you have raised will be solved by making prostitution legal. NO. There will still be human right violations in those designated red light areas. Women will be sexually abused, mistreated and mishandled. No women want to sell her body by choice, they do it due to circumstances and forces that compel them to do it. So making it legal just only means that we are accepting the sexual abuses that goes within those red light areas. It makes no sense to exploit women to satisfy needs and lusts of some men. Justifying it as the oldest profession of human history is also absolute non-sense (I wonder how one came to know that it is the oldest business). The bottom line is we do not have any rights to violate others right or abuse others. These red light areas exactly do that. Given the corrupt system that we have in our country, do you really believe that designating certain area as red light area will solve these social problems? It will be like inviting much bigger problems. They will just go out of control and will spread likeavirus around the city and the country. By the way, why do you justify the need of such areas? Is it for the entertainment of tourist? You surely do not like Kathmandu turning into Pataya of Thailand, do you? What I believe is education and sexual awareness and development of open society will in the long run help solve these kinds of social problems.
Basanta Gautam September 21, 2008 at 8:09 AM
सबैलाई धन्यबाद! यो विषयमा चिन्तन र वहसको खाँचो देखेर अलिकति भएपनि त्यो दिशामा केहि योगदान हुनसक्छ भन्ने आशय थियो टाँसोको। गम्भिर प्रतिकृयाहरु देख्न पाउँदा खुशी लागेको छ।
उजेलीजी, निश्चयनै यथार्थलाई स्विकार गर्नु र सही ब्यबश्थापनतिर लाग्नुमै राम्रो उपाय हो। मिस नेपाल प्रतियोगिताजस्तो महत्वहीन कुरालाई रोक्नुमानै आफ्नो ‘बहादुरी’ खेर फाल्नेहरुको दबदबा भएको बेला काठमाण्डौंको यौन-ब्यापारको बारेमा पनि अलिक ठण्डा दिमागले सोचिएला भन्ने आशा कमै छ। तर समस्या छ र त्यसको समाधान जरुरी भईसक्यो। अनि अर्को कुरा, यौन-ब्यापार सही-गलत के हो भन्ने कुरा पनि परश्थिति हेरी फरक हुन्छ।
परीवर्तनजी, जापानको यौन-उद्योगलाई कसरी ब्यबश्थापन र नियन्त्रण गरिएको छ, यसबारेमा जानकारी अलि कम छ मेरो। तैपनि मेरो बुझाईमा, जापान यो कुरामा “Don’t ask, don’t tell” पारामै सही, एकदम उदार छ। हरेक सडकमा एक-दुई त्यस्ता ‘अखाडा’ हुनु स्वाभाविक लाग्छ यहाँ। तर तपाईँले भनेजस्तै, आपराधिक समूहहरुले संगठित रुपमा यसमाथि कब्जा जमाएको पनि सुनिन्छ। त्यो निश्चयनै डरलाग्दो कुरा हो। यसैले, बलियो कानूनी संयन्त्र अपरिहार्य छ सही ब्यबश्थापनको लागि।
जहाँसम्म ग्राहकहरु को को हुन् भन्ने कुरा छ, यो अर्को अध्ययनको विषय हुनसक्ला। भ्रष्टाचारबाट आर्जित धनको दुरुपयोग निश्चयपनि भईरहेको हुन्छ त्यस्ता ठाउँमा। त्यसैले नेपाली समाज र प्रशाशनको माथिल्लो तहमा रहेका मान्छेहरु सबैभन्दा नियमित ग्राहक हुनसक्छन्। नेपाल आउने विदेशीहरु पनि होलान्। मैले अलिक समय अगाडि पढेको एउटा जानकारिमा बेला-बेलामा छोटो समयको लागि नेपाल आउने केहि गैर-आवासीय नेपालीहरु पनि ग्राहकको सूचिमा रहेछन्। केहि मान्छेहरु त्यति धनाढ्य नभएपनि कहिलेकाहीँ पुग्लान्, यौन-कुण्ठित हाम्रो समाजमा त्यो पनि स्वाभाविक हो।
माथि पर्यटन उद्योगको प्रसंग मैले यौन-ब्यापारकै मामिलासंग मात्रै जोडेको भने हैन। पर्यटकले रातभरि बियर पिएर बस्न पाउनुपनि रात्रि-जीबनकै एक भाग हो। त्यसैले वामदेवको आदेशले घाटामात्रै ल्याउँछ भन्ने आशय हो मेरो।
बद्रीजी, तपाईँले भन्नुभएजस्तै दिगो ब्यबश्थापनभन्दा पनि देखाउनकै लागि मात्र विना सोचविचार आदेश दिनेहरुले गर्दानै समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन बढ्दैछ।
आकारजी, समस्या वहुआयामिक छ, त्यहि अनुसारको सोच आशा गरौं हाम्रो देश चलाउनेहरुबाट।
Anonymousjee, तपाईँले उठाउनुभएको शंका पनि जायज हो, ठूलाबडाहरु 'इज्जत' जाने डरले नजान पनि सक्छन् त्यस्ता ठाउँमा। तर रेड लाइट एरिया भनेर छुट्टै कुनै ठाउँ नतोकिए पनि यस्ता गतिबिधिहरुको कनूनी ब्यबश्थापन भने जरुरी भईसकेको छ।
nepaliजी, यौन-ब्यापारका बारेमा ब्यक्तिगत रुपमा हाम्रा धारणाहरु जे भएपनि हामीले के स्विकार्नुपर्छ भने जतिसुकै कडा नियम-कानून ल्याएपनि यौन-ब्यापार नियन्त्रण हुनेछैन। हो, हाम्रो देशमा गरिबीको कारण वाध्यतावश यो पेशामा लाग्नेहरुको संख्या ठूलो छ, तर विकसित र धनी देशहरुमा पनि यो फष्टाएकै छ। गरिबीको कारण लागेकाहरु अर्को गतिलो विकल्प नभेटेसम्म वामदेवले सिठ्ठी फुक्दैमा
अन्त लाग्दैनन्। सामजिक-आर्थिक विभेदको समाधान दुई-चार दिन पुलिसलाई सडकमा दौडाउनु होइन। आफैं लागेकाहरुको कुरो त झन अलग भईहाल्यो।
रेड लाईट एरियाको धारणा भनेको कुनै निश्चित ठाउँ तोकेर "ल जे जे मन लाग्छ गर!" भनेर छोडिदिनुमात्र निश्चय पनि होइन। कुनै निश्चित ठाउँ तोकेपनि, नतोकेपनि यौन-ब्यापार र गतिबिधिहरुलाई ब्यबश्थित गर्नु र कानूनी र ब्याबहारिक संयन्त्रहरु निर्माण गर्नु हो। यसभित्र सञ्चालकहरु र यौन-कर्मीहरुको अभिलेख राख्ने, यौन-कर्मीहरुको अधिकारलाई कानूनी सुरक्षा दिने लगायतका धेरै कुराहरु पनि समेटिन्छन्। मुख्य कुरो, अँध्यारोमा भईरहेका गतिबिधिहरुलाई उज्यालोमा ल्याइदिँदा समस्याहरु धेरै कम हुन्छन्।
काठमाण्डौं अथवा नेपालको कुनै पनि शहरलाई पटाया बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो आशय कदापि होइन। (ब्यक्तिगत रुपमा, यौन-ब्यापार हुनुहुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई पनि तर यथार्थलाई मेरो विचारमात्रैले छोप्न सक्दैन।)यौन-ब्यबशायलाई कानूनी घेरामा ल्याउनु र सरकारले यसलाई 'प्रोत्साहन' दिनु फरक‍-फरक कुरा हुन्। यौन-ब्यबशायलाई कानूनी मान्यता दिइएका सबै ठाउँ पटाया बनेका पनि छैनन्।
Bharat September 21, 2008 at 7:22 PM
सबै साथीहरूमा २०६५ बडादशैँको मंगलमय शुभकामना
Sameer September 28, 2008 at 12:47 PM
कुरा सान्दर्भिक र तपाईंहरुको बिचार सही लागेयो । यौन-ब्यबशायलाई कानूनी घेरामा ल्याउन पर्छ ।